नेपाल फाइनलमा - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:४३
विराटनगर, ६ चैत । श्रीलंकालाई ४ शुन्यले पराजित गर्दै घरेलु टोली नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसीपको पाँचौ संस्करणको फाइलनमा प्रवेश गरेको छ ।
विराटनगरस्थित शहिद रंगशालामा आज भएको पहिलो सेमीफाइनलमा नेपालका लागि पुनम जर्गा मगर, अनिता बस्नेत, सावित्रा भण्डारी र रेखा पौडेलले समान एक एक गोल गरेका थिए। सुरुआतबाटै आक्रमक शैलीमा उत्रिएको नेपाली टोलीको लागि खेलको ४२ औं मिनेटमा डिबक्स भित्र अनमार्क रहेकी पुनम जर्गा मगरले पहिलो गोल गरिन्।
सो गोलका लागि कप्तान निरु थापाको बाइसाइकिल किकलाई सावित्रा भण्डारीले फ्लिक हेड गर्दा मिलेको पासमा मगरले गोल गरेकी थिइन्। यसपछि पनि पटक पटक नेपाली टोलीले श्रीलंकामाथि दबाव बनाउने क्रम जारी राखेको थियो। पहिलोहाफ सकिदाँ नेपाली टोली एक शुन्यले अग्रता बनाउन सफल रहेको थियो।
जित हात पारेको नेपालका लागि बाँकी तीन गोल दोश्रो हाफमा भएको थियो। सोही क्रममा खेलको ७३ औं मिनेटमा मध्यपंक्तिकी अनिता बस्नेतले टोलीका लागि दोश्रो गोल गरिन्। रक्षक मनमाया लिम्बूको प्रहारमा निस्किएको बललाई सावित्रा भण्डरीले हेड गर्दै मिलाइएदिएपछि बस्नेतले दुइ डिफेन्सको बीचबाट गोल गरेकी थिइन्।
त्यसैगरि खेलको ८२ औं मिनेटमा अनिता बस्नेतकै पासमा सावित्रा भण्डारीको हेडर बलले श्रीलंकाको जाली चुमेपछि नेपाल तीन शुन्यको अग्रता बनाउन सफल भयो। श्रींलकाको कमजोर रक्षापंक्तिको फाइदा उठाउने क्रममा नेपालले खेल सकिन ४ मिनेट बाकी रहदाँ चौथो गोल गर्न सफल भएको थियो।
डि बक्स भित्र अनिताले मिलाई दिएको एसिस्टमा अनमार्क रहेकी १७ वर्षिया रेखा पौडेलले ८६ औं मिनेटमा आकर्षक गोल गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरिन्। पौडेल खेलको ६४ औं मिनेटमा कप्तान निरु थापाको स्थानमा मैदान पसेकी थिइन्। आफ्नो तेश्रो अन्र्तराष्टिय खेल खेल्ने क्रममा पौडेल पहिलो गोल गर्न सफल भइन्।
फाइनल प्रवेशका लागि जित हात पारेको नेपालका लागि मध्यपंक्तिकी अनिता बस्नेतको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहयो । खेल सकिएसंगै नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले अब आफूहरु फाइनलका तयार रहेको बताए। पहिलो हाफ साचेजस्तो हुन नसकेको बताएका खड्काले दोश्रो हाफमा भने रणनीति परिवर्तनसंगै खेलाडीहरुलाई विपक्षी रक्षात्मक खेलका बारे सम्झाएपछि नतिजा राम्रो आएको बताए।
त्यसैगरि श्रीलकाका प्रशिक्षक रोहन थिलक अल्पोन्सुले भने नेपाल र भारत दुवै टोली सशक्त रहेको बताए। पहिलो हाफमा योजना अनुसार नै भएको बताएका प्रशिक्षक अल्पोन्सुले दोश्रो हाफमा नेपाली टोलीको आक्रमणलाई थाम्न सकेनन्। हामी मोरल्ली डाउन भयौं, उनले बताए।
नेपालले अब शुक्रबार हुने उपाधि भिडन्तका लागि दिउँसो हुने दोश्रो सेमीफाइनलको विजेता टोलीसंग स्पर्धा गर्नेछ । दोश्रो सेमीफाइनलमा बंगलादेशले चारपटकको विजेता टोली भारतको सामना गर्दैछ।
विराटनगर, १६ माघ । मोरंगको ग्रामथानका करिव दुई दर्जन महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण गरेका छन् ।...
buy Silvitra tab online, buy lioresal online. मंगलबारे, इलाम, ६ कात्तिक. जिल्ला समन्वय समिति इलामका...